ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ သတင်း (၅) ခု (၉.၁၀.၂၀၁၇)
9 Oct 2017 . 11:18 AM
(၁) မောင်တောဒေသ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှာ နေထိုင်ကြသူများ နေရပ်ပြန်သူများလာ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် ARSA အစွန်းရောက်အဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာကာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ယာယီခိုလုံနေကြသည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ အောက်တိုဘာလဒုတိယပတ်အတွင်း နေရပ်ပြန်သူများလာကြောင်း သိရှိရသည်။
(၂) ဖုန်ဂေး မီးယားပင် (Phongamia) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား အဓိကထား ဖိတ်ခေါ်မည်
ဘိုင်အိုမတ်စ်ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်ရာ၌ ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည့် ဖုန်ဂေး မီးယားပင် (Phongamia) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား အဓိကထား ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Tint Tint Myanmar ကုမ္ပဏီမှ သိရှိရသည်။
(၃) ပရိုဂျုဆာမကြီးစိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှာ ရုံတင်ပြသမယ်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုလောကတွင်းက အဖြစ်မှန်တွေကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ပရိုဂျုဆာမကြီးစိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှာ ရုံတင်ပြသသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၄) ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက် သစ်ကြံပိုးကို စားသုံးသင့်သလား
ဆီးချိုသမားတွေအတွက် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ပြောပြီး ရောင်းချနေတဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ အတော်များများရှိပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်( magnesium) နဲ့ Coenzyme Q10 တို့ကိုတော့ ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် အများဆုံးစားသုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးခေတ်ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သစ်ကြံပိုးကတော့ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖြည့်စွက်စာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) System Update ကနေ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာမယ့် Essential စမတ်ဖုန်း
Android ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Andy Rubin က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Essential စမတ်ဖုန်းမှာ အားနည်းချက်တစ်ခုက ကင်မရာပိုင်းအားနည်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ပြိုင်ဘက်ဖုန်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် သိသိသာသာ စွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းတဲ့အချက်ကို အခုအချိန်မှာ Software Update ကနေတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖုို့ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Essential ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ HDR, Portrait Mode, Pro Mode တွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့အပြင် ယခင်ထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနသေိ့သငျ့တဲ့ သတငျး (၅) ခု (၉.၁၀.၂၀၁၇)
(၁) မောငျတောဒသေ ကယျဆယျရေးစခနျးမြားမှာ နထေိုငျကွသူမြား နရေပျပွနျသူမြားလာ
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတောဒသေတှငျ ARSA အစှနျးရောကျအဖှဲ့၏ အကွမျးဖကျမှုကွောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာကာ ကယျဆယျရေးစခနျးမြားတှငျ ယာယီခိုလုံနကွေသညျ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြား အောကျတိုဘာလဒုတိယပတျအတှငျး နရေပျပွနျသူမြားလာကွောငျး သိရှိရသညျ။
(၂) ဖုနျဂေး မီးယားပငျ (Phongamia) စိုကျပြိုးထုတျလုပျရနျ ပွညျပရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုအား အဓိကထား ဖိတျချေါမညျ
ဘိုငျအိုမတျဈဒီဇယျဆီထုတျလုပျရာ၌ ကုနျကွမျးအဖွဈအသုံးပွုသညျ့ ဖုနျဂေး မီးယားပငျ (Phongamia) စိုကျပြိုးထုတျလုပျရနျ ပွညျပရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုအား အဓိကထား ဖိတျချေါသှားမညျဖွဈကွောငျး Tint Tint Myanmar ကုမ်ပဏီမှ သိရှိရသညျ။
(၃) ပရိုဂြုဆာမကွီးစိုး ရုပျရှငျဇာတျကား အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျမှာ ရုံတငျပွသမယျ
မွနျမာ့ရုပျရှငျနှငျ့ ဗှီဒီယိုလောကတှငျးက အဖွဈမှနျတှကေို ထညျ့သှငျးရိုကျကူးထားတဲ့ ပရိုဂြုဆာမကွီးစိုး ရုပျရှငျဇာတျကားကို အောကျတိုဘာ ၁၃ ရကျမှာ ရုံတငျပွသသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
(၄) ဆီးခြိုဝဒေနာရှငျတှအေတှကျ သဈကွံပိုးကို စားသုံးသငျ့သလား
ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ နှလုံးရောဂါဖွဈနိုငျခွကေို လြော့ကစြတေယျလို့ပွောပွီး ရောငျးခနြတေဲ့ ဖွညျ့စှကျစာတှေ ဈေးကှကျထဲမှာ အတျောမြားမြားရှိပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ( magnesium) နဲ့ Coenzyme Q10 တို့ကိုတော့ ဖွညျ့စှကျစာအဖွဈ အမြားဆုံးစားသုံးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရှေးခတျေကတညျးက အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ဆေးတဈလကျဖွဈတဲ့ သဈကွံပိုးကတော့ ဆီးခြိုဝဒေနာရှငျတှအေတှကျ ရပေနျးစားနတေဲ့ ဖွညျ့စှကျစာပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၅) System Update ကနေ ကငျမရာစှမျးဆောငျရညျ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုမွနျဆနျလာမယျ့ Essential စမတျဖုနျး
Android ဖခငျကွီးဖွဈတဲ့ Andy Rubin က ကိုယျတိုငျထုတျလုပျထားတဲ့ Essential စမတျဖုနျးမှာ အားနညျးခကျြတဈခုက ကငျမရာပိုငျးအားနညျးတာပဲဖွဈပါတယျ။ အခွားသော ပွိုငျဘကျဖုနျးတှနေဲ့ယှဉျရငျ သိသိသာသာ စှမျးဆောငျရညျမကောငျးတဲ့အခကျြကို အခုအခြိနျမှာ Software Update ကနတေဈဆငျ့ ပွနျလညျပွငျဆငျပေးဖို့ ပွုလုပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ Essential ကုမ်ပဏီရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ HDR, Portrait Mode, Pro Mode တှကေို အဆငျ့မွှငျ့တငျထားတဲ့အပွငျ ယခငျထကျ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုမွနျဆနျလာမယျလို့ သိရပါတယျ။
by Moethae Say .6hours ago
ဘာလို့ MacBook တွေဈေးကြီးပြီး Windows Laptop ကို မယှဉ်နိုင်တာလဲ?
အသက် ၆၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်သမ္မတ ယနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွား
တရုတ်လူမျိုးတွေ ယူဆထားတဲ့ ကံကောင်းခြင်း၊ ကံမကောင်းခြင်းနံပါတ်တို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်
“Introvert” တွေပြောပြတဲ့ သူတို့ရဲ့ TGIF အကြောင်း